Guddoomiyaha Golaha Shacabka: Waxaan Soo Kala Caddeyn Doonnaa Hay’adaha Sida Rasmiga Ah Uga Shaqeeya Dastuurka – Kalfadhi
Guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Mursal Shiikh Cabdiraxmaan ayaa sheegay in ay soo kala caddeyn doonaan hay’adaha ka shaqeeya qabyo tirka dastuurka, haddii ay ahaan lahaayeen kuwa Soomaalida ama kuwa kalaba.
Hadalkan ayuu ka sheegay kulanka ku saabsanaa u bandhigidda guddiga joogtada ee Golaha Shacabka shanta cutub ee dastuutka, kaas oo si wadajir ah ay usoo dhammeystireen qabyo tirkiisa guddiga madaxa bannaan ee dastuurka iyo guddiga labada gole ee dastuurka. waxaaana la soo bandhigayey qaabka loo marey dib u eegista shanta cutub, waxa la beddelay ama la soo kordhiyey, intii wada xaajood laga galay iyo inta qodob ee farsamo ahaan la hagaajiyey.
Guddiyada Dastuurka Iyo Kan Madaxa Bannaan Oo Cabasho Ka Keenay Fara Gelin Lagu Hayo Shaqadooda
Ugu danbayn guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Mursal ayaa mahad celin ka sokow waxa uu sheegay in wada shaqeyn dhow uu la yeelanaayo guddiyadan islamarkaana ka gole ahaan ay baarayaan shaqsiyaadka kale ee gacmaha kula jira howlaha dastuur oo guddiyadu ay ka dhawaajiyeen in faragelin lagu haayo shaqada ay hayaan.
Miisaaniyadda ka maqan guddiyada dastuurka ayuu sheegay in xukuumadda ay kula xisaabtami doonaan, isla markaana ay waajib tahay in guddiyadaan ay helaan miisaaniyaddii ay ku shaqeyn lahayd
Halkaan ka daawo: Guddoomiye Mursal oo arrinkaa ka hadlayo.
Horraan ayey guddiyada dastuurka sheegeen in madaxtooyada iyo xafiiska reysul wasaaraha laga magacaabay guddiyo dastuur, isla markaana shaqadooda cabaqad lagu yahay.
Shirkii seddexaad ee Golaha Iskaashiga Maamul Goboleedyada Oo Kismaayo Ka Furmaya